Lisitry ny kaonty Escrow
Lalàna iray hifehezana ireo mpikirakira ary hiaro ireo mpividy amin'ny fandoavam-bola amin'ny tsy fanatanterahana ny planina
Ny Lalàna No. (8) an'ny 2007 momba ny fananganana antoka momba ny fananan-tany ao Emiràin'i Dubai dia navoakan'i Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, lehiben'i Dubai, tamin'ny 6 ny volana 2007. Ny Lalàna dia nanan-kery tamin'ny famoahana azy tao amin'ny Gazetim-panjakana ofisialy tamin'ny 28 ny volana 2007.
Ny fifanakalozan-kevitra ivelan'ny drafitra, izany hoe ny fivarotana ny fananana ho an'ny mpividy amin'ny mpividy alohan'ny hanaovana ny fanorenana, dia mahazatra any Dubai. Ao anatin'izany fifanakalozana izany, ny fifanintsanana ara-bola sy ny fividianana entana dia miditra eo amin'ny mpandraharaha ary ny mpividy iray dia hanome daty fenoina amin'ny ho avy, matetika na volana na taona an-dalam-pandehanana raha toa ka manomana ny fanorenana ny fanorenana ary ny trano Aoka ho vonona ho an'ny mpividy. Mandra-pahatongan'izany, ny mpividy dia manana adidy handrotsa-bola amin'ny mpanjifa mankany amin'ny fividianana
vidiny, matetika hatramin'ny 70% na 80% amin'ny vidin'ny fividianana rehetra. Na izany aza, ny mpividy dia tsy mahazo tombontsoa amin'ny fananana noraisiny hividianana mandra-pahavitan'ilay izy ary handefasana ny anaram-boninahitra ao amin'ny anarany. Raha toa ka tsy mahavita manatanteraka ny fananana na tsy mandefa ny lohateny amin'ny mpividy ny mpanjifany noho ny antony rehetra, ny mpividy dia hizara ho tompom-bola tsy voavidin'ny mpandrindra ary mety ho very ny vola izay efa naloany tamin'ny mpamolavola azy. Sale & Buy Agreement. Ny fanamafisan'io lalàna io dia hita ao amin'ny Articles (9) sy (10) amin'ny Lalàna No (7) an'ny 2006 momba ny fanoratana ara-barotra marina any amin'ny Emiratin'i Dubai. Ity tsy fahampian'ny fiantohana ho an'ny mpividy amin'ny fifanakalozan-kevitra ivelan'ny fandaharan'asa ity dia nitarika mpandraharaha matihanina maro tao Dubai mba hametrahana fepetra mifandraika amin'ny mpandraharaha miara-miasa amin'ny tanjona amin'ny fiarovana ny mpividy vola mandritra ny fanamboarana sy alohan'ny fanomezana ny tany sy ny lohatenin'ny mpividy. Ny fepetra toy izany matetika dia takiana na hoe ny mpandrindra dia manome antoka ny antoka fananganana banky miaraka amin'ny mpanangom-pahefana ho toy ny fepetra nomena ny fanekena hanombohana ny fivarotana orinasa, na ny fananganana ny orinasa dia manokatra kaonty fidirana izay ahazoana mivarotra avy amin'ny mpividy Tsy maintsy aloa ny fahombiazan'ny fananganana efa nisy talohan'izay. Ny tanjona voalohan'ny Lalàna No (8) an'ny 2007 dia ny hanome fiarovana ara-dalàna ho an'ireo mpividy amin'ny fifanakalozana ivelan'ny drafitra. Amin'ny ankapobeny, ny Lalàna dia mikasa ny hampiditra fitondrana ny fisoratana anarana, lisansa ary fitsipika ho an'ireo mpandraharaha rehetra mitantana ny asa fampandrosoana ara-barotra ao amin'ny Emiratin'i Dubai.
Lalàna No. 8 an'ny 2007
Momba ny fanomezan-dàlana antoka momba ny fampandrosoana tsy miankina ao Emirày ao Dubai
Izahay, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ilay Mpitondra ao Dubai, Taorianan'ny Lalàna Federaly No. 5 an'ny 1985 ho fanajàna ny Transactions Civil, araka ny fanitsiana; Lalàna No. 7 an'ny 2006 momba ny fisoratana anarana ara-nofo ao amin'ny Emiratin'i Dubai; ary ny Lalàna No. 3 amin'ny 2006 izay mamaritra ny faritra izay mety ho an'ny tompon-tany tsy manana UAE manana ny tena izy ao Dubai, Manome ity Lalàna manaraka ity:
Famaritana sy Fanapariahana ankapobeny
Ity Lalàna ity dia hantsoina hoe "Lalàna mifehy ny fananana antoka momba ny fananan-tany ao Emirà ny Dubai No. 8 amin'ny 2007.
Raha tsy misy ny teny mifanohitra amin'ny teny hafa, ny fe-potoana sy ny fehezanteny manaraka dia hanana ny dikany mifanohitra amin'ny tsirairay amin'izy ireo:
sampan-draharaha: Departments Lands
Filoha: Ny Filohan'ny Departemanta
tale: Tale Jeneralin'ny Departemanta
Register: Ny rejistra voaomana ao amin'ny Departemantan'ny fisoratana anarana Developers
Soraty ny kaonty: Ny kaonty amin'ny banky voatondro ho fampiroboroboana ny trano izay hapetraka ny vola aloa amin'ny mpividy ny singa eo amin'ny planina na ny antokon-draharaha famatsiam-bola
Developer: Olona voajanahary na ara-dalàna nohavaozina mba hanatanterahana ny asany amin'ny fividianana sy fivarotana ny fananana ho an'ny fampandrosoana ary anisan'izany ny mpandrindra sy ny mpandrindra
Mpandraharaha ara-kaonty: Banky na orinasa ara-bola nomena ny Departemantan'ny fitantanana ny kaonty Guarantee
Manampahefana manam-pahaizana: Ireo manam-pahefana avy amin'ny governemanta dia nanome alalana ny hanome alalana ny Mpamorona
Fampandrosoana: Ny fananganana tranobe na rafitra maromaro maromaro ho an'ny trano fonenana na ara-barotra.
Property: Ny zava-drehetra izay miorina amin'ny toerany ary tsy azo ovaina tsy misy fandringanana na fanovana amin'ny endrika ivelany.
Unit: Fandefasana ampahany amin'ny fananana novidin'ny mpamorona ho an'ny antoko fahatelo.
Ny fepetra voalazan'ity Lalàna ity dia ampiharina amin'ny mpandraharaha iray izay mivarotra tetikasa tsy manara-dalàna amin'ny tetik'asa fampandrosoana ara-barotra ao amin'ny Emirat ary mandray vola avy amin'ny mpividy na ny antokon-bola.
Ny lisitra manokana ho antsoina hoe "Register of Developers" dia ho vonona amin'ny
Sampan-draharaha. Ny anaran'ireo mpandraharaha nahazo alalana hanatanterahana ny asa fampandrosoana ara-barotra ao amin'ny Emirat dia voasoratra ao anatin'io rejisitra io. Tsy misy mpikaroka afaka manatanteraka ireo voalaza ireo raha tsy voasoratra ao amin'ny rejisitra voasoratra izany ary nomena alalana avy amin'ny Manampahefana manam-pahaizana araka ny fepetra mifandraika amin'izany.
Ny Developer dia tsy hamoaka dokam-barotra amin'ny fampahalalam-baovao ao an-toerana na avy any ivelany, na mandray anjara ao an-toerana na
fampirantiana vahiny, mba hampiroboroboana ny fivarotana orinasa na ny fananan-tany, mandra-pahazoany fahazoan-dàlana nosoratan'ny Departemanta. Ny talen'ny tale dia manome ny fanapahan-kevitra ilaina amin'ny fitondrana ny fepetra takiana amin'ny dokam-barotra amin'ny fampahalalam-baovao ary mandray anjara amin'ny fampiratiana.
Fametrahana kaonty momba ny antoka
Mpamolavola iray maniry hivarotra tariby manoloana ny drafitra dia tokony hampiharina any amin'ny Sampan-draharaha mba hanokatra kaonty Guarantee. Ny fampiharana dia tokony miaraka amin'ny antontan-taratasy manaraka:
1-Dubai Tompon-dakan'ny mpandraharaha momba ny varotra sy ny indostria;
2-Lisitry ny varotra;
3- Fanamarinana ny anaran'ny tetikasa hivoahana;
4 - Kopy ny fifanekena ataon'ny mpamorona sy ny mpandrindra;
5 - Famolavolana sy drafitra ara-javakanto izay ankatoavin'ny manampahefana voakasik'izany sy ny mpamorona master;
6-fanambarana ara-bola nomena avy amin'ny tompon'andraikitra iray manana ny mari-pahaizana ara-dalàna, izay ahitana ny vola miditra sy ny fandanian'ny tetikasa ary ankatoavin'ny mpanolotsaina amin'ny fampandrosoana ny vola azo alaina amin'ny mpitrandraka ny fampandrosoana;
7- Asa natomboky ny mpandrindra hanomboka ny fanorenana ny tetik'asa aorian'ny nahazoany ny fankatoavan'ny mpandrindra ny fivarotana ny drafitra na ny orinasa iray avy amin'ny mpamorona master raha toa ka tsy misy ny mpandrindra.
8 - Fifanakalozana fifanarahana eo anelanelan'ny Developer sy mpividy iray.
Ny Kaonty momba ny antoka dia noforonina araka ny fifanarahana voasoratra eo amin'ny
Ny mpandrindra sy ny mpandrindra ny kaonty amin'ny alalan'ny vola aloa amin'ny mpividy ny singa ao amin'ny planina na ny volan'ireo antokon-draharaha ara-bola dia apetraka ao amin'ny kaonty manokana ahafahana misokatra amin'ny anaran'ny tetik'asa fananana amin'ny kaontin'ny Account Trust.
Ity fifanarahana ity dia mametraka ny fepetra momba ny fitantanana ny kaonty, ny zo sy ny adidin'ny antokon-draharahan'ny fifanarahana ary ny kopian'ity Fifanarahana ity dia apetraka ao amin'ny Departemanta.
Ny Departemanta dia afaka manoratra ny fifanarahana momba ny fividianana entina eo anelanelan'ny mpandrindra ny famolavolana sy ny mpandraharaha mifandraika amin'ny tany, na ny ampahany aminy avy amin'ny mpanangom-pahefana, amin'ny folio momba ny tany toy izany.
Fitantanana ny kaonty momba ny antoka
1. Ny kaonty momba ny antoka dia hosokafana amin'ny anaran'ny tetikasa ary ny fividianana dia ampiasaina manokana ho an'ny tetik'asa fanorenana ny tetik'asa fananana. Ireo mpandrindra ny Developer dia tsy mahazo alalana hametraka ny vola napetraka ao amin'ny kaonty Guarantee.
2. Raha manana tetikasa marobe ny Developer, dia tsy maintsy sokafana ny kaonty Guarantee samirery amin'ny tetikasa tsirairay.
1. Ny Departemanta dia hanomana rejisitra manokana antsoina hoe Register of Account
Mpitandrin-tena hanoratra ny anaran'ireo mpikarakara ny kaonty.
2. Ny mpandrindra ny kaonty dia takiana ny hahafeno ny fitantanana ny kaonty Guarantee.
1. Ny Trust Trustee dia tokony hanome ny Sampan-draharaham-paritra momba ny vola sy ny fandanian'ny kaonty Guarantee amin'ny fotoana tsy tapaka. Ny Departemantany dia afaka mangataka ny kaonty amin'ny kaonty amin'ny fotoana rehetra hanomezana azy ny fampahalalam-baovao sy ny angona ilaina, ary ny Departemantany dia afaka manendry olona izay heveriny ho mahafeno fepetra ny fanambarana sy ny angona.
2. Raha hitan'ny Departemanta fa nanao fanitsakitsahana ny
ireo fitsipika ao amin'ity lalàna ity sy / na ny fitsipika fampiharana azy, dia hanompo azy
taratasy fanamarinana ary manome azy fe-potoana hanitsy ny fandikana.
Ny mpametra-pialana na ny solontenany dia afaka mandinika ny rakitsoratry ny kaontiny ary mangataka kopia ary ny solontenan'ny manam-pahefana ofisialy dia afaka mandinika ireo rakitsoratra sy mahazo kopia.
Raha toa ny Developer ka manaiky ny fampandrosoana mba hahazoam-bola avy amin'ireo orinasa orinasa orinasa, dia ireo orinasa sy orinasa ireo dia tokony hametraka ny vola ao amin'ny kaonty Guarantee mba horoahina mifanaraka amin'ny fepetra voalazan'ity lalàna ity.
Ny Trust Trustee dia tokony hitazona ny 5% amin'ny totalin'ny kaonty garanti aorian'ny nahazoan'ny Developer ny fanamarinana amin'ny famandrihana ary ny vola voatokana dia tsy azo alaina amin'ny Developer mandrapahatongan'ny herintaona aorian'ny fidirana ao amin'ny anaran'ny mpividy.
Raha toa ka misy ny herim-po mahery izay manakana ny fanatanterahana ny tetik'asa fananana, dia ny tompon'andraikitra amin'ny kaonty momba ny tetikasa, aorian'ny fifampidinihana amin'ny Departemanta, dia handray ny fepetra takiana rehetra hiarovana ireo zo mpaninjara mba hiantohana ny fanatanterahana ny tetik'asa fananana na ny famerenana ny volan'ny mpandraharaha.
Raha tsy manavakavaka ny sazy rehetra omena amin'ny lalàna hafa, sazy iray
Ny fampidirana am-ponja sy ny fandoavana lamandy tsy latsaky ny 100,000 Dirhams, na ny iray amin'izy ireo, dia atao amin'ny olona rehetra:
1- Mitondra asa momba ny fampandrosoana trano any Emiràny tsy misy fahazoan-dalana.
2- Mandray sora-baventy diso na manao diso amin'ny manam-pahefana voakasik'izany
mahazo fahazoan-dàlana hikaroka ny orinasa fampandrosoana trano.
3- Manome fahafaham-po ny hivarotra singa ao amin'ny fivoaran'ny fananan-tany.
4- Embezzles, ampiasaina na fandoavam-bola an-jambany omena azy ho an'ny tanjona
fananganana ny fampandrosoana trano, ary manaparitaka izany karama izany.
5- Ny mpanao fanadihadiana izay manomana fanadihadiana diso momba ny vokatry ny fanaraha-maso azy
dia mitarika eo amin'ny lafiny ara-bola ny mpandraharaha iray, na manafina mazava ny heviny
zava-misy avy amin'ny tatitra nataony.
6- Ny mpanolo-tsaina rehetra izay manaiky am-panajana ny antontan-taratasy diso momba ny fananana iray
7 - Ny mpikirakira rehetra izay mifandraika amin'ny broker izay tsy voasoratra ao amin'ny rejisin'ny broker
ao amin'ny departemanta araka ny rafitra laharana No. 85 an'ny 2006 momba ny Real Estate
Broker s Register ao amin'ny Emiratin'i Dubai.
Ny Developer dia nofoanana avy amin'ny rejisitra amin'ny iray amin'ireto toe-javatra manaraka ireto:
a. Raha manambara fatiantoka izy.
b. Raha tsy manomboka fanorenana ao anatin'ny enim-bolana amin'ny daty izy
dia nomena fahazoan-dàlana hamidy tsy misy fialan-tsiny azo ekena.
c. Raha manafoana ny fahazoan-dàlana ny manampahefana mpamokatra.
d. Raha manitsakitsaka ny isa (2) na (3) na (4) na (5) amin'ny lahatsoratra 16 amin'ity
e. Raha manitsakitsaka ny lalàna sy / na lalàna mifehy ny tena izy
Ireo Mpamorona efa misy ao anatin'ny fotoana izay mahomby io lalàna io dia tokony hanitsy ny satany araka ny fepetra voalaza ao anatin'ny enim-bolana amin'ny daty famoahana ao amin'ny gazetim-panjakana ofisialy, ary ny Departemanta dia afaka manolotra izany vanim-potoana izany amin'ny fotoana hafa izay heveriny fa mety.
Ny Departemantany dia afaka manangona saram-pandraharahana mifanohitra amin'ny tolotra omena mifanaraka amin'ity lalàna ity.
Ny lahatsoratra rehetra ao amin'ny lalàna na ny lalàna dia nofoanana raha toa ka mifanohitra amin'ny fepetra voalazan'ity lalàna ity.
Ny filoha dia hanome ny fanapahan-kevitra ilaina hanatanterahana ny fepetra voalazan'ity lalàna ity.
Io lalàna io dia havoaka ao amin'ny gazetim-panjakana ofisialy ary hahomby amin'ny daty famoahana azy. Mohammed Bin Rashid
Navoaka tao Dubai 6 May 2007.19 Rabi 11 1428 H.
Ity fizarana Q & A manaraka ity dia novolavolaina miaraka amin'ny toro-hevitra sy fanampiana sarobidy ao amin'ny Departemantan'ny tany Dubai:
Iza no ampiharin'ny Lalàna?
Ny Lalàna dia mihatra amin'ny mpikirakira ny mpamorona rehetra sy ny mpikirakira ny fampiroboroboana ny asan'ny fampandrosoana trano any Dubai.
Inona avy ireo fepetra takian'ny lalàm-pandaminana ireo?
Ny mpikaroka rehetra, tsy misy an-dàlana, dia tsy maintsy manana fahazoan-dàlana. Ireo mpandraharaha izay tsy manana fahazoan-dàlana ara-barotra navoakan'ny Departemantan'ny Fampandrosoana ara-toekarena ao Dubai na avy amin'ny iray amin'ireo faritra malalaka dia hanana fahafahana hampihatra ny fahazoan-dàlana momba ny fampindramam-bola mahaleotena vaovao. Ankoatra ny fepetra takiana amin'ny fahazoan-dàlana, ny mpandrindra dia tsy maintsy mahazo ny fisoratana anarana ao amin'ny rejisitry ny mpandrindra izay notazonin'ny Sampan-draharaham-panjakana tao Dubai talohan'ny nanaovany asa fampandrosoana tany amin'ny Emirà.
Amin'ny toe-javatra manao ahoana dia mila manokatra kaonty Guarantee ny mpandrindra?
Ny mpikirakira rehetra maniry hanolotra trano hofan-trano, izany hoe talohan'ny nanorenana ny trano dia vonona ny hanolotra ny kaonty Guarantee. Ity fepetra takiana amin'ny kaonty Guarantee ity dia tsy mihatra raha tsy misy ny mpandraharaha manamboatra sy mivarotra sehatra maro amin'ny fampivoarana ireo mpividy maro samihafa; Mihatra ihany koa amin'ny toe-javatra misy ny mpamolavola manorina sy mivarotra sehatra iray monja, na mikasa ny hanorina sy hivarotra sehatra maro amin'ny mpividy iray. Ankoatr'izay, ny hevitry ny fivarotana dia tokony ho entina hanamboarana be dia be mba hampidirana ny fivarotana maimaim-poana, fa koa ivelan'ny drafitry ny fampindramam-bola. Noho izany, isaky ny misy mpandrindra handray ny vola avy amin'ny mpividy entana iray na fanolorana tombontsoa amin'ny fananana iray, dia tsy maintsy manokatra kaonty Guarantee aloha izy.
Iza no mety miasa amin'ny kaonty Guarantee?
Ny banky na ny orinasa ara-bola nahazoan-dàlana avy amin'ny Banky foibe UAE handray ny fanangonam-bola fahatelo ary miasa ao Dubai dia mety hiasa amin'ny kaontin'ny kaonty amin'ny kaonty. Ny banky na ny orinasa ara-bola toy izany dia tsy maintsy ankatoavin'ny Departemantan'ny tany Dubai. Ho toy ny fepetra takiana amin'ny fidirana an-tsoratra, ny kaonty amin'ny kaonty dia tokony hampiditra fifanarahana voasoratra amin'ny Tafika an-tananan'i Dubai amin'ny fametrahana ireo fepetra sy fepetra takian'ny kaontin'ny kaonty momba ny kaonty.
Afaka mampahazo vola amin'ny fampandrosoana ny tetikasa koa ve ny mpampiantrano ny kaonty?
Eny, banky na rafitra ara-bola dia afaka mandray andraikitra amin'ny maha-fitokisana ny kaonty ary manome vola amin'ny fampandrosoana ny tetikasa.
Inona ny vola tsy maintsy aloa amin'ny kaonty Guarantee?
Ny vola rehetra noraisina tamin'ny mpividy tany amin'ny fifanakalozan-kevitra ivelan'ny drafitra (anisan'izany ny vola azony avy amin'ny orinasa mpitrandraka) sy ny fivoaran'ny fampandrosoana ara-barotra fananana dia tsy maintsy alaina amin'ny kaonty Guarantee amin'ny tetikasa. Ny fandraisan'anjaran'ny vola amin'ny tetikasa amin'ny tetikasa dia tsy mila alaina amin'ny kaonty Guarantee.
Ho an'ny inona no mety hividianana vola avy amin'ny kaonty Guarantee?
Amin'ny ankapobeny, ny vola dia tsy azo aloa afa-tsy amin'ny kaonty Guarantee mba hametrahana ny faktioran'ireo mpanelanelana sy mpanolo-tsaina tafiditra amin'ny tetikasa. Tsy ny fandaniana rehetra naterin'ny mpandraharaha mifandray amin'ny tetikasa dia mendrika ny karamaina amin'ny kaonty Guarantee. Ohatra, vola iray monja amin'ny 5% amin'ny kaonty Guarantee Account ihany no azo ampiharina manoloana ny vidin'ny fampandehanana ny tetikasa. Ny mpandraharaha ankapobeny sy ny vola ilaina amin'ny fividianany ny tany dia tsy azo alaina amin'ny kaonty Guarantee.
Rahoviana ny vola azo avy amin'ny kaonty Guarantee?
Ny fifanarahana an-tsoratra eo amin'ny mpandrindra iray sy ny tomponandraikitry ny kaonty voatendry dia ahitana ny antsipiriany momba ny fanamboarana fanamboarana izay takiana amin'ny alàlan'ny kaonty Guarantee. Ny mpitantana ny tetik'asa momba ny tetikasa dia hampahafantatra ny Account Trustee rehefa vita ny asa fanorenana iray ary hanao fangatahana fandoavam-bola amin'ny mpiantoka sy ny mpanolo-tsaina izy. Ny mpandraharaha momba ny kaonty momba ny kaonty dia hanara-maso ny fampandrosoana ary hanamarina raha efa nahatratra ny tsingerintaona nahaterahana na tsia. Raha vantany vao afa-po, ny Account Trustee dia hanome alalana ny sandam-bola hapetraka avy amin'ny kaonty Guarantee mba hametrahana faktioran-draharaha sy torohevitra amin'ny mpanolo-tsaina. Ireo fandoavam-bola ireo dia hoentin'ny Account Trust mivantana amin'ny tompon'andraikitr'asa sy / na mpanolotsaina amin'ny faktiora voamarina ary tsy azo aloa na amin'ny alalan'ilay mpandrindra.
Inona no tanjon'ny tahiry 5%?
Ny artikla 14 ao amin'ny Lalàna dia mitaky ny kaontin'ny kaonty amin'ny kaonty 5% amin'ny totalin'ny vola aloa ao amin'ny kaonty Guarantee mandritra ny fe-potoana iray taona aorian'ny nandraisan'ilay mpandrindra ny lohatenin'ny singa ao amin'ny anaran'ny mpividy. Ny tanjon'ity tahirin-kevitra 5% ity dia ny hiantoka fa ny mpamorona dia hanala haingana sy handaminana ny fahavoazana amin'ny fananana izay hita amin'ny famaranana na mety ho hita ao anatin'ny taona voalohany manaraka.
Ny Lalàna dia nanan-kery tamin'ny 28th June 2007 taorian'ny famoahana azy tao amin'ny Gazetim-panjakana. Amin'ny firy ny Lalàna dia mihatra amin'ireo tetikasa natsangana talohan'ny 28 Xunum Xunum?
Ny artikla 18 ao amin'ny Lalàna dia mitaky ny mpandraharaha hanaraka ny Lalàna ao anatin'ny 6 volana amin'ny famoahana azy, izany hoe amin'ny 28th December 2007
Ny sampan-draharahan'ny tany ao Dubai amin'izao fotoana dia manao fanadihadiana momba ny trano rehetra
fivoaran-draharaha any Dubai. Ity dingana ity dia efa nomanina ho vita amin'ny tapaky ny volana septambra 2007. Vokatr'io fanadihadiana io, ny fampiroboroboana amin'izao fotoana izao mikasika ny fivoaran'ny drafitry ny planina dia napetraka amin'ny iray amin'ireo sokajy telo:
1. ho an'ny fivoarana izay 70% hatramin'ny 80% vita, tsy ho ny mpandrindra
ilaina hanokatra kaonty momba ny antoka;
2. ho an'ny fivoaran-draharaha izay nanombohan'ny asa an-tserasera ary efa tafakatra mihoatra ny fandefasana
dingana, ny kaonty Guarantee dia mila sokafana amin'ny mpamorona amin'ny 28th
Desambra 2007; ary
3. Ho an'ny fampivoarana izay tsy nahatratra ny sehatra fananganana, ny kaonty Guarantee dia mila misokatra avy hatrany. Ho an'ny fivoarana izay tsy mbola nanombohan'ny fivarotana tsy manara-dalàna, ny kaonty Guarantee dia mila manokatra alohan'ny hanombohan'ny fivarotana.
Raha efa nanomboka ny fivarotana tsy manara-dalàna ny mpandraharaha iray ary mila manokatra kaonty Guarantee izy izao, moa ve izy mila mandoa ao amin'io kaonty io ny habetsaky ny vola azony tamin'ny mpividy?
Tsia, fa ny vola rehetra azon'ireo mpividy ireo amin'ny ho avy dia tsy maintsy alaina ao amin'ny kaonty Guarantee.
Ahoana raha efa nametraka rafitra miara-miasa amin'ny mpandraharaha matihanina mba hiarovana ny mpividy ny mpividy?
Ao anatin'ireo tranga izay efa nametrahana antoka ny banky fananganana orinasa mpanamboatra orinasa na nanokatra kaonty momba ny fidinan'ny mpanjifan'antoka, ny Departemanta momba ny tany ao Dubai dia hamerina handamina ny fandaharana ary mety hanome alalana azy ny fepetra fanokafana ny kaonty momba ny antoka araka ny Lalàna raha heveriny fa mety izany.
Ho afaka hiditra an-tsoratra ny fahalianany hividy fifanarahana amin'ny Departemantan'ny tany ao Dubai ve ny mpividy?
Eny, ny Departemanta momba ny tany ao Dubai dia manangana rafitra mialoha ny fisoratana anarana izay ahafahan'ny mpividy izay nanao fifanarahana mba hividianana planina tsy misy drafitra avy amin'ny mpandrindra iray dia afaka manoratra ny kaontiny momba ny fividianana ho liana amin'ny lohan'ilay fananana. Izany dia hanampy amin'ny fisorohana ny mpividy amin'ny fivarotam-bidin'ny famarotana ilay vondrona. Ankoatr'izany, satria ny rafitra dia ahafahan'ny mpividy manoratra ny isan-jaton'ny vidin'ny vidin-javatra izay novidiny tsindraindray, raha toa ka misy ny olana amin'ny mpamorona, ny fanoratana ny fifanarahana amin'ny mpividy dia ho porofo mazava noho ny fividianany ny vondrona sy ny isan-jatony ny vidin'ny entana izay azony.
Fanamarihana farany: Ny Departemantan'ny tany Dubai dia hamoaka fitsipika fampiharana ity Lalàna ity, ao anatin'izany ny saram-pitrandrahana, mandritra ny herinandro vitsy.